बीमा उद्योगमा प्राविधिक प्रवृत्ति - Victor Mochere
by लरेन कर्डेल
उद्योगहरूले व्यवसायमा रहन र नाफामा रहन आफ्ना ग्राहक-सम्बन्धित मार्केटिङ प्रस्तावहरू र व्यापार मोडेलहरू समायोजन गर्न जारी राख्छन्। र बीमा उद्योग पनि यसबाट अपवाद छैन। बीमाकर्ताहरूले आफ्ना सन्देशहरू समीक्षा गर्दै छन् र राम्रोसँग सूचित गर्न र लक्षित बजारहरूसँग जडान गर्न केन्द्रित छन्। साथै, खरीद व्यवहारसँग सम्बन्धित परिवर्तनहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न। यसको शीर्षमा, केही प्रविधि प्रवृत्तिहरू बीमा उत्पादनहरूको प्रकृतिलाई पुन: आकार दिन सेट गरिएका छन्। बीमा उद्योग डिजिटल भविष्यको सामना गर्ने तयारीमा छ। यस नयाँ युगमा बीमा उत्पादनहरू वितरण र बिक्री गर्न प्रविधिले अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यहाँ बीमा उद्योगमा प्रमुख प्रविधि प्रवृत्तिहरू छन्।
१. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
१. रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (RPA)
बीमाकर्ताहरूले नीति व्यवस्थापन, अन्डरराइटिङ, र धोखाधडी पत्ता लगाउन मद्दत गर्न पहिले नै एआई प्रयोग गर्दैछन्। भविष्यमा, AI लाई ग्राहकहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरूमा आधारित व्यक्तिगत नीतिहरू विकास गर्न प्रयोग गरिनेछ। AI ले बीमाकर्ताहरूलाई नयाँ उत्पादन र सेवाहरू विकास गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, AI लाई ग्राहक प्रोफाइल सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा ग्राहकको उमेर, लिङ्ग, पेशा, क्रेडिट स्कोर, र ड्राइभिङ इतिहासको डेटा समावेश हुन्छ।
त्यसपछि बीमाकर्ताहरूले यी जानकारीका टुक्राहरू उत्पादन र सेवाहरू सिफारिस गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् जुन विशेष रूपमा ग्राहकको लागि अनुकूल छ। बीमाकर्ताहरूले पनि आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा र उत्पादनहरूको प्रयोगको अनुगमन गर्न AI प्रयोग गर्न सक्छन्। तिनीहरूले त्यसपछि अवस्थित प्रस्तावहरू सुधार गर्न, नयाँहरू विकास गर्न, र जालसाजी दावीहरू पहिचान गर्न यस अनुगमनबाट सङ्कलन गरिएको डेटाको विश्लेषण गर्न सक्छन्। AI विकसित हुँदै जाँदा, बीमाकर्ताहरूले ग्राहकको जानकारीको बढ्दो मात्रासँग अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवहार गर्नेछन्, विशेष गरी बीमाको दरहरू प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्छन्।
चीजहरूको इन्टरनेटले इन्टरनेटमा जडान भएका अरबौं यन्त्रहरूलाई जनाउँछ। बीमाकर्ताहरूले यी उपकरणहरूद्वारा उत्पन्न हुने डाटा र जानकारीको विशाल मात्रामा ट्याप गर्न थालेका छन्। भविष्य यो छ कि यो प्रविधि बीमित व्यक्तिहरूको संख्या बढाउन, दाबी लागत नियन्त्रण गर्न, ठगीहरूको पहिचान गर्न र ग्राहक सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयोग गरिनेछ। बीमाकर्ताहरूको लागि पहिलो चरण भनेको IoT उपकरणहरूबाट सबै डेटा सङ्कलन गर्नु हो। यसमा स्मार्टफोन, कम्प्यूटर, र फिटबिट जस्ता पहिरन योग्य प्रविधिहरू समावेश छन्।
बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको यसको सम्भावित मूल्य बुझ्नको लागि यस डेटाको विश्लेषण गर्नु हो। यो X को साथ एक खजाना नक्सा फेला पार्न जस्तै छ। बिग डाटा एक आवश्यक स्रोतहरू मध्ये एक हो जुन बीमाकर्ताहरूले राम्रो र राम्ररी सूचित निर्णयहरू लिनुपर्दछ। IoT यन्त्रहरूबाट सङ्कलन गरिएको डाटाले ढाँचा र प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जुन सर्वेक्षणहरू जस्ता परम्परागत डेटा स्रोतहरूले गर्न सक्दैन।
एक पटक बीमा कम्पनीहरूले डेटाको मूल्य बुझेपछि, तिनीहरूले आफ्नो व्यापार सञ्चालन सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, दावी समायोजनकर्ताहरूले कुनै पनि समयमा दुर्घटना स्थानको नक्सा पहुँच गर्न, ढिलाइ कम गर्न र ग्राहक सन्तुष्टि सुधार गर्न मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। जीवन बीमा कम्पनीहरूले IoT यन्त्रहरूबाट डेटा प्रयोग गरी नीति धारक अझै जीवित छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि, महत्त्वपूर्ण संकेतहरू निगरानी गर्ने र बीमा कम्पनीमा डेटा पठाउने स्मार्ट ब्रेसलेटलाई वार्षिक नविकरण नगरी दीर्घकालीन नीतिहरूको लागि जीवनको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। IoT ले जोखिम रोकथाम, सल्लाहकार सक्रियता, र ग्राहक अवधारण जस्ता बीमा-सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
RPA ले सफ्टवेयर रोबोटहरू समावेश गर्दछ जसले भुक्तान प्रक्रिया वा ग्राहक सेवा सोधपुछ जस्ता दोहोरिने प्रशासनिक कार्यहरू प्रशोधन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ। भविष्यमा, दावी प्रक्रियालाई गति दिन र स्वचालित बनाउन RPA प्रयोग गरिनेछ। बीमा उद्योगमा आरपीए बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। प्रविधिले बीमाकर्ताहरूलाई प्रक्रियाहरू छिटो बनाउन, लागत घटाउन र ग्राहक सन्तुष्टि सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
भविष्यमा, RPA दावी प्रक्रिया स्वचालित गर्न प्रयोग गरिनेछ। यसले बीमाकर्ताहरूलाई ग्राहक सेवा सुधार गर्दा समय र पैसा बचत गर्न मद्दत गर्नेछ। हाल आरपीए प्रयोग नगर्ने बीमाकर्ताहरूले निकट भविष्यमा प्रविधि लागू गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ। रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन अझै पनि अपेक्षाकृत नयाँ प्रविधि हो। यद्यपि यो अझै व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन, सफ्टवेयर रोबोटहरूले सटीकता र गतिका साथ केही धेरै जटिल कार्यहरू पूरा गर्न सक्षम भएका छन्।
धेरैले विश्वास गर्छन् कि भविष्यमा, RPA लाई बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूको दाबी प्रक्रियाहरू र व्यवसाय सञ्चालनका अन्य क्षेत्रहरूलाई स्वचालित बनाउन प्रयोग गर्नेछन्। यी नियमित सञ्चालनहरू स्वचालित गरेर, बीमाकर्ताहरूले डेटा सङ्कलनमा बढी शुद्धता सुनिश्चित गर्न सक्छन्। थप रूपमा, यसले कर्मचारीहरूलाई नयाँ उत्पादन वा सेवाहरू विकास गर्ने र ग्राहक सम्बन्ध सुधार गर्ने जस्ता थप महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा काम गर्न स्वतन्त्र गर्नेछ।
यी प्राविधिक प्रवृतिहरूसँग बीमा उत्पादनहरूको केही मुख्य कार्यहरू र अन्तर्निहित इनपुटहरू परिवर्तन गर्ने क्षमता र शक्ति छ। यी प्रवृत्तिहरूमा लगानी नगर्ने बीमाकर्ताहरूलाई आधुनिक युगमा बाँच्न गाह्रो हुनेछ। तिनीहरूले यी अवसरहरूको फाइदा उठाउनै पर्छ जसले विकास र नयाँ विचारहरू चलाउँछ। बीमा नीति छनौट गर्न र नीतिको दरहरू निर्धारण गर्न उपभोक्ताको यात्रालाई पुन: आकार दिन वा रूपान्तरण गर्न लगानी गर्नुहोस्।
घरबाट काम गर्दा कसरी उत्पादक रहन